कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढ्ने निश्चित, वृद्धभत्ता पनि बढ्ने ! - Experience Best News from Nepal
१क्लबमा नेय्मारको बेहाजिरीले क्लबले गर्यो नेय्मारको बोनस कटौती !!
२भोजपुर घटना : पहिला सँगै चियापान, पछि गोली हानाहान !!
३आज बिहीबार, राशिफलले आजको तपाइको दिनको बारे के भन्छ !! पढ्नुहोस आजको राशिफल छोटकरीमा
४पहिलो भेटमै शारीरिक सम्पर्क भयो, के गर्ने ?
५विश्वकप जित्ने भारतको सपना चकनाचुर
६रोनाल्डोले गरे मड्रिडका यी मिड फिल्डरलाई युभेन्ट्स ल्याउन अस्विकार
७प्रधानमन्त्री केपी ओली रातो कार्पेटमा ! हिलोको अपमान कि रातो कार्पेटको ?
८सलमान- कट्रिनाको विवाहको दृष्य भाइरल
कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढ्ने निश्चित, वृद्धभत्ता पनि बढ्ने !
प्रकाशित मिति : सोमवार, बैशाख ३०, २०७६
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ का लागि सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी भएको हो । निजामती कर्मचारीले हाल खाइपाइ आएका मासिक तलबमा १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढाउने तयारी थालिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा रहने तलब पुनरावलोकन समितिले सिफारिस गर्ने भएको छ । कर्मचारीको तलब १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरी आन्तरिक गृहकार्य र छलफल थालिएको पुनरावलोकन समितिका एक सदस्यले बताएका छन्।
महँगीअनुसार कर्मचारीको तलब बढाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर तीन वर्षदेखि सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउन सकेको थिएन ।यसपटक भने बढ्ने सरकारकै उच्च अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।
यस्तै यसपटक वृद्धभत्ता पनि १ हजार बढाउने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आउने जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। यसअघि सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
नाकामा विषादी परिक्षण फिर्ताको विरोधमा यूवा कृषि मञ्चको आपत्ति
बाबुराम भट्टराई हली बनेको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल (हेर्नुहोस् ५ तस्बिरमा)
गलबन्दी’ विवादले जातिय रुप लिन थालेपछि शम्भु राइले दिए यस्तो जवाफ !
यि हुन् सेक्स भिडियो बनाएर सालीलाई हैरान बनाउने प्रहरी नायब निरीक्षक !
प्रकाश सपुतको गलबन्दी शम्भू राईको गीतसँग हुबहु मिल्यो,संगीतको बजारमा मच्चियो तहल्का !
प्रकाश सपुतलाई आइजीपी खनालकाे फोन आएपछी, सपुत लेखे फेसबुकमा यस्तो स्टाटस !
बार्सिलोनालाई डी लिग्टको ठाडो इन्कार !! बायर्नसंगै युभेन्ट्स र पी.एस.जी डी लिग्ट ल्याउने दौडमा
आयक्सका स्टार डिफेन्डर एबं नेदरल्यान्ड स्टार माथिज्स डी
अन्तत नेय्मारले तोडे मौनता !! पुर्बी क्लब जाने बारे खोले सनसनीपूर्ण रहस्य
पेरिस सेन्ट जर्मन एवं ब्राजिलियन स्टार नेय्मारले झड्काप्रदायी